Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, - Fihavaozana Karismatika katôlika fiombonana
Home »Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo,
“Inty ny andro nataon’ny Tompo, mifalia sy miravoravoa isika”
Io teny fanevantsika tamin’ny taon-jaobily faha 50 taona nisian’ny Fihavaozana Karismatika io no entiko misaotra an’Andriamanitra amin’izao fisokafan’ity tranokala ny Fihavaozana Karismatika Katolika FIOMBONANA eto Madagasikara ity.
Fitaovana serasera anankiray entintsika hanabeazana ara-panahy ho antsika mpikatroka karismatika sy fampitahana vaovao ary koa hahalalan’ny hafa ny momban’ny Fihavaozana Karismatika Katolika.
Vokatry ny asan’ny Fanahy Masina izany, ary Izy no homem-boninahitra!
Ny Fanahy Masina anie hitari-dalana sy hanolo-tsaina antsika hatrany momba ny fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra. Fantantsika fa tokana ny tanjona dia ny fitoriana ny Vaovao Mahafalin’i Kristy, hanambarana amin’ny olona rehetra fa velona ny Tompontsika, tia antsika ary akaiky antsika Izy. Te hamonjy ny olona rehetra Izy amin’izao vaninandro farany iainantsika izao ary tsy tiany ho very na dia iray aza.
Koa enga anie ity fitaovam-pifaneraserana ity ho fitaovana hitondrantsika am-bavaka an’ireo olona mbola lavitra ny Tompo, ho fitaovana entintsika mamonjy fanahy ny olona izay mangetaheta sy noana ny fahamarinana. Farany ho fitaovana entina hanamasinantsika tena mba ho vonona isika amin’ny fahatongavan’ny Tompo.
Tsy ho adino koa ny misaotra ny ekipan’ny serasera nahandro nahamasaka namorona izao fitaovana serasera izao Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly soa anareo.